လက်ပ်တော့နဲ့ ဆိုမယ့်သီချင်း — MYSTERY ZILLION
ကြံကြံဖန်ဖန် အကြံပေါ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေရပါတယ်..
လက်ပ်တော့မှာ ဗီစီဒီသီချင်းဖွင့်ပြီး ကာရာအိုကေဆိုမယ်တဲ့..
လက်ပ်တော့မှာ တပ်တဲ့ Head phone က ကိုယ့်အသံကို Record လုပ်နိုင်တယ်.. Sound box ကလည်း သီချင်းတွေကို Play နိုင်တယ်..
ဒါပေမယ့် live speaking ကို တော့ ပြန်မထွက်ဘူးလေ..
ဥပမာ .. မိုက်ခရိုဖုန်းကနေ "ဟဲလို" ဆိုရင် .. လက်ပ်တော့ရဲ့ ဆောင်းဘောက်စ်ကလည်း "ဟဲလို" လို့ တခါထဲ ပြန်ထွက်ချင်တာ.. Live microphone ပေ့ါ ကာရာအိုကေဆိုသလို ကိုယ်ဆိုတာကို ကိုယ်ပြန်ကြားချင်တာပေါ့.. သွားလေရာရာ လက်ပ်တော့ လေးနဲ့ သီချင်းဆိုမယ်တဲ့..
အဲဒီလို စွမ်းအားရှိတဲ့ ဆောင်းကဒ်လဲရမှာလား
အခြား Device ပေါင်းထည့်ရင် ရနိုင်သလား
ဘယ်သူတွေ လုပ်ဖူးသလဲ.. အဲဒါမျိုးကို လက်ပ်တော့မှာ အသံထွက်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ အကြံပေးကြပါအုံး... :39: :39:
သြော်... ကြံကြံဖန်ဖန်လဲ တွေးတတ်ပါ့.. ဒါလေးများ
vcd ကာရာာာာအိုကေ တစ်လုံး၀ယ်လိုက်ပြီးရော... ဟီး :d
အနော်လည်း လုပ်တတ်ဘူးဂျ... Mz က ကိုကြီးတွေ သိချင်သိမှာ...
သိတဲ ့သူများဖြေပေးကြပါဗျို ့......
တော်တော်အကြံကြီးတဲ့လူပဲ portable ကာရာအိုကေပေါ့ဗျာ :D:D
sound card က support လုပ်ရင်ရတယ်ဗျ။ Support လုပ်တဲ့ sound card ဆိုရင် Windows Volume Mixer ရဲ့ output မှာ line-in ဆိုတာကိုဖွင့်လိုက်ရင်ရတယ်။
ဒါလေးများ .. ဒါလေးများ .. လာပြီး ပြောနေရသေးတယ်
ဟဲ ဟဲ .. သိတာလေး ရှိတော့ နည်းနည်း လျှာရှည်ချင်လာရော
အစ်တိုကြီးက ဆိုချင်တယ်ဆိုတော့ ညီက ပြောပြပေးရမှာပေါ့
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုလုပ်ပြီး ဆိုနေကျ ခင်ည။
လွယ်ပါတယ် ... ပထမဦးဆုံး အစ်ကို့စက်ထဲမှာ Microphone ရယ် .. အသံကို recording လုပ်နိုင်မဲ့ software လေးတစ်ခုရယ် ရှိထားရင်တော့ လုပ်လို့ ရပါပြီ။
အသံ သွင်းတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့် Microphone ထဲက အသံရယ်၊ ကျန်တဲ့ အသံတွေကို ဖမ်းနိုင်အောင် လုပ်ရပါမယ်။ Mixer ထဲကိုသွားပြီး stereo Mix ဆိုတာကို on ထားပေးလိုက်ရုံပါဘဲ။
သြော် .. ကာရာအိုကေအခွေကို အသံဖျောက်တဲ့ နေရာမှာ WMPlayer နဲ့ ဆို Play menu ထဲက audio and language track ထဲမှာ Right, Left , Both ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ Left channel ကိုရွေးပြီး ဆိုရင် ကိုယ့်အသံက channel နှစ်ခုလုံး ထွက်ပါတယ်လို့
မရှင်းတာ မလင်းတာ ရှိလျှင် ပြန်မေးပါရန်။
သီချင်းဆိုချင်တာ.. ကိုယ်ဆိုတဲ့သီချင်းကို တခါထဲ အသံကြားနေချင်တာ..
အသံထွက်အောင်တော့လုပ်လို့ရမယ်ဗျ.. အသံကို DVD Karaoke စက်တွေလို
အက်ခိုး တွေ ဒီလေးတွေ တော့ ထည့်လို့ရမှ မဟုတ်ဘူးဗျ.. အသံ ခြောက်ခြောက်ကြီးပဲထွက်လာမှာ
Software ကနေထည့်ရင်လည်း သီချင်းတပုဒ်လုံးပါ အက်ခိုး တွေဝင်ကုန်ရော.
vocal သံချည်းပဲ ထည့်လို့ရတယ်လို့ သိရင် ဝင်ဆွေးနွေးပေးပါဦး..
ရတယ် အသံခြောက်ခြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် စိုစိုပဲဖြစ်ဖြစ် အသံထွက်လာရင်တော်ပြီ.. လောလောဆယ်ဆယ် ကိုယ့်ရှူးကိုယ့်ပတ်နေလို့ .. Live Sound ကို laptop Speaker ကနေ ကြားရရင်တော်ပြီ တကယ်ပါ.. ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ ကြော ကြော...
သြော် . ကိုကွန်ပျူတာ ခရေဇီရယ်
ပြောတဲ့အထဲမှာ အဲဒါတွေ ပါပြီလေ .. recording ပါ လုပ်လို့ ရတဲ့အထိ ပြောပြပေးထားတဲ့ ဟာကို .... ဟွန်း ... မစမ်းကြည့်ဘဲနဲ့ လာလာပြောနေတယ် ... အိုကေ ....
ကာရာအိုကေဗွီစီဒီကို ထည့် .. windowsmediaplyer နဲ့ ဖွင့် ပြီးရင် audio track မှာ left channel ကိုရွေးလိုက် ၊ ပြီးရင် Sound Effect Manager ထဲက Mixer ထဲကိုသွား .. stereo mix ကို on လိုက်ရင် ကိုယ်ဆိုတဲ့ အသံက စပီကာကရော ၊ နောက်ခံ တီးလုံး အသံကိုပါ ကြားရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
စမ်းလို့ ရရင် ဘီယား တိုက်ရမယ်နော်
PowerDVD နဲ့ဆိုပိုကောင်းမယ် သူ့မှာ Karaoke mode ပါတယ်ဗျ။ All Program >> Accessories >> Entertainment >> Volume Control ထဲမှာတော့ microphone ကို mute မလုပ်ထားဖို့တော့လိုပါမယ်။
လက်ပ်တော့က lenovo Core Duo လေး..
Sound ကတော့ Conexant HD Audio
အသံက ကြိုက်တဲ့ နေရာမှာစမ်း Tone လေးတွေ ပြေးနေတယ်.. Recording အတွက် လုံး၀ အဆင်ပြေတယ်.. ဒါပေမယ့် ကာရာအိုကေဆိုဖို့အတွက်တော့ မိုက်ကအသံတိုက်ရိုက်မထွက်ဘူး.. အဲဒီတော့ ဘာ Mixer သုံးရမလဲ ကြော တခါထဲ link ပါပေးနော်..
တေချာပေါက် ဘီယာအမူးတိုက်မယ်.. :67:
မစ်ဆာ တော့ရှိတယ်... တူနယ်ချင်းတွေနဲ့ အခန်းအလုံပိတ်ပီး ရီကောရင်း တော့လုပ်ဖူးတယ်.. ဟီး :D:D (အာပြဲသံတွေနဲ့) အတော်လေးကောင်းတယ် လွယ်လဲလွယ်တယ်.. ကာရာအိုကီးတော့မတိဘူးဟီး... ဒါကနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဟာ.. အစမ်းသုံးကြည့် အစဉ်ပြေရင်ခရက်ရှာ ပေးမယ်နော်...:D:D:D
ဗျာ .. mixer မပါဘူး ဟုတ်ရား
အီး ... ပါမှာပါ ကိုခရေဇီရာ ...
ဒီလိုလေး လုပ်ရင် တွေ့လိမ့်မယ် .. လုပ်ကြည့် ..
status bar ပေါ်က volume လေးကို နှိပ် ၊ ပြီးရင် properties ထဲကို၀င် .. အဲဒီမှာ mixer device ဆိုတာကို ခန့်ခန့်ညားညား ကြီးနဲ့ တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ် .. အဲဒီအထဲမှာမှ mixer ပါတဲ့ ဟာကို ရွေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် mixer ကို on လိုက်ရင် ရပါလိမ့်မယ်။
ကဲ .. ဘီယာ တိုက်တော့ .. ဒါဘဲ ရရ၊ မရရ။